OMaskandi bahlanganyele ndawonye ukulwa nodlame | isiZulu
OMaskandi bahlanganyele ndawonye ukulwa nodlame
#ZumaBirthday: Kunandisa umaskandi emcimbini kaMengameli eKliptown
Washaya Maskandi kwahlehla yonke into kubulawa uVan Damme
Owayegijima kuMaZulu uthokozela ukucula umaskandi
Durban - Abaculi bakaMaskandi bahlanganyele ndawonye ngeculo eligqugquzela ukuthula nokuhloniphana.
Lokhu kwenzeka nje sekube nezidubedube eziningi kulo mculo kodwa okwafika kwaba wuvala wukulimala nokushona kwabathandi balo mculo emcimbini owawuseCurries Fountain, eThekwini, ngomhlaka 29 Ephril.
Laba baculi abadume ngokuba ngabase-East bathi abakwazi ukuhlala basonge izandla bebe beyibona inkinga.
Lokhu, ngokusho kuka-Ali Mube weqembu lama-SAP, kwasilimaza kakhulu isithunzi salo mculo kanye nesithunzi sabo bonke abashayi bengoma.
“Ngingathi-nje ukwenza kwethu le ngoma isinqumo sethu njengabaculi abafisa ukuthula nokubambisana kulo mculo kamaskandi. Kusizwisa ubuhlungu obukhulu ukulima kwabalandeli bethu emicimbini yomaskandi belimazana bodwa ngenxa yomculo wethu,” kusho uMgube.
Lo mculi uthi akukuhle ukuthi umculo wabo udume njengomculo wabantu abazondanayo nabangafiselani lutho oluhle.
Kuleli culo kuhlanganyele ndawonye abaculi abafana noMgube, uMjikijelwa, uMnikezwa, uJaiva Zimnike, iGcokama Elisha, Abafana bakaMgqumeni, iNdlemnyama, uNgiga kanye noDullas.
UMjikijelwa yena uthi inhloso yabo wukugquguqzela balandeli ukuba bahloniphane.
OLUNYE UDABA:'UMaskandi usufana nemboni yamatekisi kanjalo namaqembu epolitiki'
“Le ngoma siyenze ngenhloso yokukhuza ukuthi abalandeli bomculo babe munye, noma ungamthanda umculi, kodwa musa ukuxabana nabanye abangamthandi,” kusho uMjikijelwa.
Uqhubeke wathi abathandi bomculo kumele bakuqondisise ukuthi lesi yisona sinkwa sabo, ngakhoke ukungezwani, ukungabekezelelani kanye nodlame olwenzekayo lungahle lubaphuce isinkwa uma bengakunqandi kusenesikhathi.
"Abalandeli abakuqonde ukuthi umsebenzi lo kuthina bese kubona indlela okumele bajabule ngayo ngokuchomelana njengabebhola abalandeli kodwa bengalwi futhi lokhu osekujwayele ukwenzeka emcimbini ukuthi abantu abathile uma bengamthandi umculi bamxoshe esiteji.
Lokhu akufanele kwenzeke bekezela nje noma ngabe awumthandi odlalayo kuze kungene omthandayo nawe ngoba ngeke uthande nawe masekuzoxoshwa umculi othandwa uwena. Mina-nje ngithi abalandeli abathandane futhi bajabule ndawonye," kuqhubeka yena.
Ukubambisana kwalaba baculi kubonisa ngokusobala ukuthi bazimisele ngokubuyisa isithunzi sikaMaskandi futhi ngeke bavume kube nokubi okuzongena phakathi kwabo kudale uqhekeko.
UMthandeni osanda kuvakashela emahhovisi ephephandaba iLANGA eyoxolisa kuMthobisi Sithole ngokumhlasela uthi ulithokozele ithuba lokusebenza nalaba baculi.
Ngibone kukuhle ukuba yingxenye yalo msebenzi ngoba ngiyakwazi ukubaluleka kokuzehlisa kubathandi bomculo, izintatheli nakubo bonke abantu abakhona kule mboni,” kusho uMthandeni.
BUKA: Kuxwayiswa ngezikhukhula njengoba liqhubeka nokuyidliva ezingxenyeni zezwe
Cpt: 16-24°C Pta: 16-17°C
Jhb: 13-17°C Bloem: 12-19°C
Dbn: 18-19°C PE: 16-25°C
Sir Lowry's Pass - 13:01:28 PM STATIONARY TRUCK in the left lane on Sir Lowrys Pass Ezinye zasemigwaqeni